I-ROMY & SAVANNAH CASE: UMartin Vrijland
Isizathu sokufa se Savannah Dekker asikwazi ukuchongwa yi-NFI
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO, ROMY & SAVANNAH CASE	by UMartin Vrijland	23 Novemba 2017	• 7 Comments
Iingxelo ze-Degragraaf ukuba imbangela yokufa kuka-Savannah Dekker ayikwazi ukumiselwa yi-NFI. UFrank de Groot, owaziwa kwi-Anass Aouragh, ityala le-pathologist (ngoku sele lihamba ne-NFI ukuba lizimele). Le "ngcaphephe" ichaza ukuba umzimba oye wasemanzini amnandi iintsuku eziliqela unzima ukugcina. Ngenhlanhla, [...]
Icandelo elikhawulezayo kwimeko yeRomy no-Savannah: amapolisa ayavalwa apho "i-Savannah yafunyanwa"
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO, ROMY & SAVANNAH CASE	by UMartin Vrijland	17 Julayi 2017	• 21 Comments
Nangona ngoku inyanga kunye nesiqingatha esidlulileyo, u-Savannah Dekker watholakala efile emhadeni, ngoku ngokukhawuleza isigwebo sigqiba ukucima umxokelelwane kwi-industrial property De Kronkels. Yikuphi ukuphazamiseka okukhokelela ekubulungeni ukwenza oku ngoku kucacileyo ngoku, kuba ngubani osenzayo ngoku iinyanga kunye nesiqingatha emva [...]
Ingqungquthela ye-Psyop igxeke ukubulala eRomy Nieuwburg kwimeko yeRomy no-Savannah?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO, ROMY & SAVANNAH CASE	by UMartin Vrijland	10 Julayi 2017	• 17 Comments
Umfana oneminyaka eyi-14 ovuma ukudlwengula nokubulala umngani wakhe ofunda naye uRomy Nieuwburg (14) waseHovelavelaken, akazange akhathazeke ngomzuzwana emva kwesenzo sakhe. Oku kubonakala ekuveleni ngokuchanekileyo kwemizila awashiye kuloo mva kaLwesihlanu ntambama 2 Juni. Umenzi wobugwenxa wayesela igrin ye-lemonade endleleni [ekhaya]
Icala leRomy & Savannah linamathele kwiindaba zamabonakude kwaye "ubungqina"
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO, ROMY & SAVANNAH CASE	by UMartin Vrijland	1 Julayi 2017	• 0 Comments
Ihlala ibali eliphawulekayo eli lifana-lokubulala uRomy no-Savannah. Ngokuqinisekileyo, asisayiva nantoni na ngokuphathelele ukubulawa kukaRomy. Emva koko, "isisombululo". Umenzi wobubi owaziyo. Umfana oneminyaka eyi-14 ubudala uye waxhaphaza waza wabulala uRomy. Indlela eyenzile ngayo le mi sebenzi ayibonakalisiwe kwaye ukuba kukhankanywe kakade, [...]
Icala laseRomy ne-Savannah ukususela ngoku, lathula?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO, ROMY & SAVANNAH CASE	by UMartin Vrijland	23 Juni 2017	• 5 Comments
Ngezona zinto ezininzi ezigxeka kakhulu okanye apho i-intetho esemthethweni ibizwa ngokuba ngumbuzo, ubona ukuba bayathululwa ngokukhawuleza kunokwenzeka. Eli qhinga lifana nendlela ophazamisa ngayo umntwana okhalayo ngoba ufuna ukunakwa. Ubeka i-pacifier emlonyeni okanye uyinika [...]
Ngaba ngaba ngamagama abrokre kwi-case yaseRomy Nieuwburg ne-Savannah Dekker?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO, ROMY & SAVANNAH CASE	by UMartin Vrijland	16 Juni 2017	• 68 Comments
[Ukuhlaziywa: Okokuqala funda yonke ifayili malunga neentuthuko zakutsha apha] Kucacile ukuba ukubulawa kukaRomy no-Savannah kusasaxakeka. Nangona isicatshulwa esicangcazelayo malunga nokungabikho kweRomy, yancedwa ehlabathini, iimpendulo ze-Facebook zibonakala ngathi ziyi-trolls kunye nabantu abadala [...]
Ukumangalela uRomy Nieuwburg kwimeko yeRomy & Savannah ibuthathaka: Imininzi imibuzo!
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO, ROMY & SAVANNAH CASE	by UMartin Vrijland	13 Juni 2017	• 34 Comments
Ndineempendulo ezininzi kwinqaku yam ngeCawa, ngoJuni 11, apho ndashicilela ingcamango yombongo evela kumfundi owayecinga ukuba uRomy Nieuwburg ayengekhoyo (bonani apha). Kulapho ndifumene neengcamango ezinomsindo ezivela kubafundi abakufumanisileyo ukuba ndiyakwazi ukupapasha into enjalo. Ndiyaqonda ukuba, [...]
Ngubani owayenguRomy Nieuwburg kwaye luphi ubudlelwane phakathi kokubulawa kukaRomy no-Savannah?
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO, ROMY & SAVANNAH CASE	by UMartin Vrijland	11 Juni 2017	• 37 Comments
[Ukuhlaziywa: Okokuqala funda yonke ifayile apha uze ubone indlela icebo elingezantsi elingavumelekanga ngayo, kodwa kukhokelela ekuqondeni okusha. Ngoko qakraza kuqala kwikhonkco apha ngasentla kwaye ufunde inqaku elikufutshane]
Utyelelo lulonke: 2.533.927